Alshabaab oo weerar la beegsaday taliye sare oo ka tirsan milteriga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab ayaa maanta duhurkii weerar gaadmo ah ku qaaday kolonyo uu la socday Jen. Maxamed Jimcaale (Goobaale) oo ka tirsan milateriga Soomaaliya, xilli uu marayay meel ku dhow degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
General Goobaale ayaa ka badbaaday weerarka dhabgalka ah, hase ahaatee waxaa goobta la isku weydaarsaday rasaas xoog leh.
Weerarkan ayaa ka dhacay meel ku dhow Kabtan Laas oo u dhaxeysa Baraawe iyo Marka, waxaana gaari uu la socday Jen, Goobaale oo ah taliyaha guutada 3-aad ee ciidanka xooga dalka lala eegtay qarax miino oo wadada la geliyey.
Maraka qaraxu qabsaday kolonyada sarkaalkan ayaa Alshabaab dagaal fool ka fool ah la beegsadeen ciidamada dowladda, waxaana dhacay dagaal qaatay ku dhawaada saacad.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ee Dowladda C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa sheegay in xaalada General Goobaale ay aad u wanaagsan tahay, isla-markaana uu ka badbaaday isku daygii dil ee lala damacsanaa.
“Gaari uu watay jeneraal Goobaanle ayaa lagu weeraray meel u dhaxeysa Kabtan Laas iyo Roobow, markii ay ka soo baxeen Baraawe” ayuu yiri C/qaadir Siidii.
Alshabaab ayaa bar ay ku leyihiin Internetka ku sheegtay iney halkaas ku gubeen gaari ka mid ahaa kolonyada Jen. Goobaale, balse sarkaalku weerarka gaadamada ah ka badbaaday.